थाहा खबर: ‘संघीयता चाहिँदैन, राजतन्त्र नफर्की मुलुक बन्दैन’
नेकपा र कांग्रेस कुहिरोका कागजस्तै भए
राजावादीहरुले आगामी मंसिर २० गते काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शन तयारी गरिरहेका छन्। त्यसकै पूर्वतयारीस्वरुप काठमाडौंसहित यसअघि पोखरा, धनगढी, हेटौंडा, वीरगञ्ज र बुटवलमा प्रदर्शन गरेका थिए। सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक विवादमा फसेको छ। सरकार एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा मुछिरहेको छ। यही विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता राजेन्द्र लिङ्देनसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्र चाहियो भन्‍ने मागसहितको देशभर भइरहेको प्रदर्शनलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ?
अहिलेको देशव्यापी प्रदर्शन राप्रपाको आयोजनामा भइरहेको हो?
गणतन्त्र असफल भइसकेको निष्कर्षसहित प्रदर्शन भइरहेको हो?
भनेपछि... देशलाई संघीयताको आवश्यकता छैन?
सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ?
अब राजसंस्था फिर्ता हुन्छ त?
भनेपछि अब राजसंस्थाले मात्रै देशको विकास गर्न सक्छ?
हामीले प्रष्टसँग भनिरहेका छौँ। राजसंस्था फर्कने साथ बाटाहरु बन्‍न थाल्ने, बिजुली बल्न थाल्ने हुन्छ भनेका होइनौँ। रातारात मुलुक कायापलट हुन्छ भनेका पनि होइनौँ। राजसंस्था आएपछि देशमा स्थिरताको बाटो प्रारम्भ हुन्छ। राष्ट्रियताको प्रारम्भ हुन्छ। राष्टिय एकता मजबुद हुन्छ। सामाजिक सद्भाव बढ्छ। त्यसको जगमा बसेपछि देश निर्माण गर्न सकिन्छ।
काष्ठमण्डपको अन्तिम तलामा २० वटा थाम राखियो